သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ကျောပိုးအိတ်အထည်အလိပ်
ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်ပြည့်စုံ၏လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကျယ်ပြန့်ဖောက်သည်တွေ, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်တင်ပို့တဲ့သိရသည် ကျောပိုးအိတ်အထည်အလိပ်မူလကနိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရန်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးချပြီးကျွမ်းကျင်နှင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံအလုပ်လုပ်၏ကစားသမားအရည်အချင်းပြည့်မီပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကျယ်ပြန့်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးပြည့်ထုတ်ကုန်တွေထောက်ပံ့ဖို့ခဲယဉ်းကြိုးစားကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်မြင့်စက်ကိရိယာများနှင့်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာ၏အခြေခံပေါ်မှာကျနော်တို့ကအရည်အသွေးပြည့်စစ်ဆေးမှုများတင်းကြပ်စဉ်အတွင်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, သိပ္ပံနည်းကျစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် Multi-လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်မှီခိုထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်ရာပူဇော်သက္ကာကိုကြသည်။ ကျနော်တို့အနာဂတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ဖို့အသစ်နှင့်အဟောင်းဖောက်သည်များကြိုဆိုပါတယ်။
BF 2-1 : မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိအထည်အလိပ်
BF 2-2 : Cordura အထည်အလိပ်
1. Cordura အထည်အလိပ် 500D, 1050D
2. Feature ကို: က Ultra-အလငျးကိုအလေးချိန်, တာရှည်ခံ, Fiber ကိုပွန်းစားခြင်း, ရေနံ Replellency, အမြင့် Bond
4. အရောငျ: ကျနော်တို့အရောင်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေး။
ကျွန်တော်တို့နှင့်စံနှင့်သင်လိုအပ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. စုံစမ်းရေးကော်မရှင်သို့ဆက်သွယ်5မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
6. : Source: ထိုင်ဝမ်
BF 2-3 : ballistic အထည်အလိပ်
BF 2-4 : အထည်အလိပ် polyester
1. polyester အထည်အလိပ် 150D ~ 1800D
2. T က / CD ကိုအထည်အလိပ်, T ကပတ်ချာလည် T က A / C ကို check,
3. Feature ကို: လြယ္ကူစောင့်ရှောက်မှု, high intensity, ချေး-ခံနိုင်ရည်မြင့်မားအရောင် Fast ။
4. အထူးအအမည်: ပုံနှိပ် & (ဗီနိုင်း, က Ultra-အလငျးကို) W / P ကို​​သုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
5. အရောငျ: လူပျိုအရောင်, pearlescent အရောင်, သို့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်ကိုနှုန်း customized ။
ထုတ်လုပ်ဖို့နမူနာကိုလိုက်နာဖို့ 6. တောင်းခံခြင်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။